Thomson ဗွီဒီယိုကွန်ယက်များကအိုင်ဗင်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ကာဗွန်ခြေရာကိုဖြေရှင်းရန် CONVINcE Consortium ကိုညှိနှိုင်း | | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ရက်ညှိနှိုင်းရေးအိုင်စီတီစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကာဗွန် Footprint နေရပ်လိပ်စာမှ Consortium စည်းရုံး
ငါးဥရောပနိုင်ငံများကနေမီဒီယာနည်းပညာကုမ္ပဏီများဗီဒီယို Delivery ကွန်ယက်ထဲမှာ Power စားသုံးမှုလျှော့ချဘို့ Solutions စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်အကြံပြုဖို့
RENNES, ပြင်သစ် - နိုဝင်ဘာ 26, 2014 - သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ယနေ့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းစီမံကိန်း၏ပစ်လွှတ်ခြင်း, သတင်းအချက်အလက်များ၏ကာဗွန်ခြေရာကိုလျှော့ချ၏စိန်ခေါ်မှုများ, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်နည်းပညာ (အိုင်စီတီ) စက်မှုလုပ်ငန်းဖြေရှင်းလိမ့်မည်ဟုငါးခုဥရောပနိုင်ငံများတွင် 18 မိတ်ဖက်တစ်ဦးလုပ်ငန်းစုကြေညာခဲ့သည်။ သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်သည်အဘယ်သူ၏ချက်ချင်းအာရုံစိုက်အိုင်ပီ-based ကိုဗီဒီယိုကွန်ရက်မှာပါဝါစားသုံးမှုကိုလျှော့ချများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ချဉ်းကပ်ဖန်တီးဖြစ်လိမ့်မည်သည့်လုပ်ငန်းစု, ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ် - အကြောင်းအရာ encoded ကြောင့်ဖြစ်သောမှာ devices တွေကိုဖမ်းယူဖြစ်ပါတယ်ရှိရာ headend ထံမှ ထို့အပြင် core နဲ့လက်လှမ်းကွန်ရက်များထည့်သွင်းစဉ်းစား, လောင်လေ၏။
ပြင်သစ်, ဖင်လန်, ရိုမေးနီးယား, ဆွီဒင်နှင့်တူရကီအနေဖြင့်သင်တန်းသားများနှင့်တကွ, 30 လစီမံကိန်းကိုစက်တင်ဘာလ 2014 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်စည်းရုံးသိမ်းသွင်း။ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသစ်မီဒီယာများအတွက်ယူရီကာ / ဆဲလ်တစ်-Plus အားသုတေသနပဏာမခြေလှမ်းတစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြင်သစ် "ပုံများ & Réseaux" သုတေသနစပျစ်သီးပြွတ်အားဖြင့်ထောက်ခံသည်။
"2020 အားဖြင့်အင်တာနက်ကိုဖွင့်ကာဗွန်ခြေရာကိုလေကြောင်းခရီးသွားလာမှု၏နှစ်ဆခန့်မှန်းထားသည်။ အင်တာနက်လမ်းကြောင်း ပို. ပို. ဗီဒီယိုကိုမောင်းနှင်နေသည်ကတည်းကကျနော်တို့အိုင်စီတီ footprint ကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် IP ကို-based ကိုဗီဒီယိုဖြန့်ဝေကွန်ရက်များပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်ရပါမယ် "ဟု Claude Perron, သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာအရာရှိကပြောသည်။ "သူတို့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချအဖြစ်ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ကြီးထွားလာစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစည်းရုံးသိမ်းသွင်းပဏာမညှိနှိုင်းခြင်းအားဖြင့်, သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ရက်စွမ်းအင်-related ထုတ်ကုန်များအတွက် Eco-ဒီဇိုင်းကိုအပေါ်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုအဖြစ်ဥရောပညွှန်ကြားချက်ထားချက်အရဖြစ်ပါတယ်။ "
အဆိုပါစည်းရုံးသိမ်းသွင်းစီမံကိန်းကို encoding က / transcoding အပါအဝင်အိုင်ပီကိုဗီဒီယိုဖြန့်ဝေဘို့နည်းပညာအကြောင်းအရာများ, core ကို / မက်ထရိုကွန်ယက်များ, ထိုကဲ့သို့သော 4G နှင့် 5G အဖြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်ကွန်ယက်များ, content တွေကိုဖြန့်ဝေကွန်ယက်များ, routing protocols, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined ကွန်ယက်များ, နှင့်ဖြန့်ဝေပလက်ဖောင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်အမှာစကားပြောကြား။ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းလည်း software ကိုအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်, Eco-ဒီဇိုင်း, ပါဝါတိုင်းတာနှင့်ပါဝါစားသုံးမှုကိုလျှော့ချဖို့အဆုံးမှအဆုံးသို့ချဉ်းကပ်ပေးရန်ဒီဇိုင်းအတွေ့အကြုံကိုတိုင်းတာ၏အရည်အသွေးအဆိုတင်သွင်း။ အဖွဲ့ဝင်များကအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဖျောပွသောပစ်မှတ်ထားစမ်းသပ်ခြင်းမှတဆင့်ရရှိသောစီမံကိနျး၏ရလဒ်များကိုထုတ်ဝေရန်မည်, နှင့်လည်းစံချိန်စံညွှန်းအလောင်းများကိုဖို့ရလဒ်များကိုပေးသွားမှာပါစည်းရုံးသိမ်းသွင်း။ စီမံကိန်းများ၏အလိုရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသက်ရောက်မှုပြင်းထန်တဲ့အာဏာလျှော့ချရေးရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူအစပိုင်းမှာဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းအသစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါစည်းရုံးသိမ်းသွင်းပဏာမသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' မကြာသေးမီကမွေးစားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ISO ကို 14001 စံလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ, မူဝါဒစွန့်ပစ်စီမံခန့်ခွဲမှု, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု, ထုတ်ကုန်အသစ်မိတ်ဆက်နှင့်ထုတ်ကုန်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအဝင်အမြင့်ဆုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အာရုံစိုက်။
"IBC2014 မှာသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယို Networks ကပေးအပ်သည်ဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦမှ '' တိုင်းဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်မှာ '' ချဉ်းကပ်နည်းသည်, headend အတွက်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု minimize လုပ်သည့်ပဏာမခြေလှမ်းတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်" ဟု Perron ကဆက်ပြောသည်။ "On-ဝုဏ်နဲ့ cloud-based အရင်းအမြစ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်တိုင်းဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်မှာသည် dynamically နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်များကိုသူတို့လှုပ်ရှားမှုထဲမှာထိပ်ကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်လိုအပ်နေအချိန်မရွေးချထားပေးစဉ်ဖောက်သည် 24 /7လိုင်းများမှပါဝါ-optimized ဟာ့ဒ်ဝဲရည်စူးဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆင့်မြင့်ဗွီဒီယိုချုံ့ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာတစ်ဦးကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်, မြေပြင်, မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်, ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အမြင့်ဆုံးသိပ်သည်းဆမှာသာလွန်သောဗီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်အလှူငွေအဘို့အနိမ့်ဆုံး Bandwidth ကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါထုတ်လွှင့်အာဏာ ဂြိုဟ်တု, cable IPTVနှင့် OTT န်ဆောင်မှု။ တိုင်းမျက်နှာပြင် (TM) ချဉ်းကပ်မှုနောက်ကွယ်မှာက၎င်း၏ဆန်းသစ်မှတဆင့်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်သည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်စားသုံးမိ, အမှတ်တံဆိပ်, ကြော်ငြာသွင်း, encoding က / transcoding နှင့်ထုပ်ပိုးနည်းပညာများတစ်ခု All-လွှမ်းခြုံကဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦများကိုဖန်တီးရန် On-ဝုဏ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးနဲ့ cloud-based အရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်။ မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေအခုသူတို့ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းတိုင်းစက်ကိရိယာနှင့် platform ပေါ်တွင် Multi-screen ကိုန်ဆောင်မှုများအတွက်မယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့လိုအပ်တိုင်း key ကိုစွမ်းရည်ရှိသည်။ တိုင်း Screen ကိုနောက်ကွယ်မှသင်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ အလည်အပတ် www.thomson-networks.com.
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: တိုင်းမျက်နှာပြင် (TM) အမှတ်တံဆိပ်နောက်ကွယ်မှ
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/ThomsonVN/ThomsonVN-BehindEveryScreenLogo.jpg
အသံလွှင်း ကာဗွန် Footprint အကြောင်းအရာ Consortium စည်းရုံး routing သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် 2014-11-26
ယခင်: တက္ကဆက်လေယာဉ်အမှုထမ်း Productions Zylight F8 LED ကို Fresnel နှင့်အတူ '' IRONMAN '' စိန်ခေါ်မှုတွေ့ဆုံ
နောက်တစ်ခု: channel-in-a-Box ကို (နေ့ ing)